विश्वका कुख्यात तानाशाहका सन्तानहरुका क्रुर स्वभाब यस्तो थियो « Pana Khabar
विश्वका कुख्यात तानाशाहका सन्तानहरुका क्रुर स्वभाब यस्तो थियो
समय : 12:16 am
इतिहासमा विश्वमा थुप्रै डरलाग्दा र खतरनाक तानाशाहहरुले शासन गरेका थिए। तिनिहरुले थुप्रैको क्रुर तरिकाले हत्या मात्रै गरेनन्, घाईते बनाए र बर्बर दमन गरे।
तर धेरै तानाशाहहरुको अन्त्य भने उनीहरुको दुष्कर्म अनुसारनै भयो। धेरै तानाशाहहरुका सन्तान आफ्ना बाबु जस्तै भएर निस्किए भने केहिका सन्तान् भने असल थिए।
जानौं विश्वका केहि क्रुर तानाशाहहरु र तिनका सन्तानहरुका बारेमा :
१- हिटलर पुत्रः जीन म्यारिए लरेन्ट
हिटलरलाई विश्व इतिहासकै सबैभन्दा खतरनाक तानाशाह मध्ये एक मानिन्छ । उसले यहुदीहरुमाथि मात्र होइन आफ्नै परिवारमाथि पनि क्रुरता प्रदर्शन गरेको थियो ।
एक फ्रान्सेली महिलासँग गोप्य सम्बन्ध पछि जन्मेको हिटलरका छोरो जीन म्यारिए लरेन्ट भने फ्रान्सेली रेल वेमा काम गर्थ्यो । हिटलरले आफ्नो सन्तानकोरुपमा स्वीकार नगरेपछि ती महिलाले आफ्नो पुस्तकमा योर फादार वाज हिटलर लेखेर छोडेकी थिइन् ।
२- सद्धाम हुसैनको पुत्रः उदय हुसैन
इराकमा दशकौं सम्म एकलौटी शासन गरेका इराकी तानाशाह सद्धाम हुसैनलाई अमेरिकाले मारेको थियो । सद्धाम हुँसैनको पुत्र उदय हुसैन पनि उनको बाबु जस्तै कृत्यका लागि कुख्यात थियो ।
उदयमाथि हत्या, यातना र बलात्कार जस्ता गम्भिर अपराध गरेको आरोप लागेको छ । उनले आफ्नै पिताका पर्सनल टेस्टरको हत्या गरेका थिए । सन् २००३ मा उनलाई अमेरिकी सेनाले मारेको थियो ।
३- गद्दाफी पुत्रः मुतास्सिम गद्दाफी
लिवियामा ४ दशक भन्दा बढी शासन गरेका मुआमर गद्दाफीका पुत्र मुतास्सिम गद्दाफी आफ्नै बाबु मारिने गृहयुद्धको अन्त्यतिर देशको बागडोर सम्हालेका थिए । अन्तराष्ट्रिय मन्चमा आफ्ना कुरा राख्न गद्दाफीले छोरालाई छान्थे ।
४-इदी अमीनका पुत्रः फैसल वाङ्गिटा
गद्दाफीका बाबु छोरामाथि कैयौं महिलाहरुमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । सुन्दर महिला छान्नका लागि बाबु छोराको प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको समेत बताइन्छ । गृह युद्धको अन्त्यमा गद्दाफीका बाबुछोरालाई त्यहाँका लडाकुहरुले शिर्त शहरमा घिसारी घिसारी मारेका थिए । गद्दाफीका बाबु छोरालाई सँगै युवतीहरुको बलात्कार गरेको समेत आरोप लागेको थियो ।
संसारका क्रुर तानाशाह मध्ये एक इदी अमिन युगाण्डाका तानासाह हुन् । करि ८ वर्ष युगाण्डाको राज गरेका अमिनले मान्छेकै मासु खाने गरेको बताइन्छ ।
इदीका छोरा फैसलले पनि उनकै पिताको पदचाप पच्छ्याए । बाबु छोराले देशमा ठूलो अत्याचार गरे । पिताको निधनपछि भने फैसललाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो र जेलमा उनको हत्या गरियो ।
५- किम जोङ उन- किम सङ इल
उत्तर कोरियाको बागडोर सम्हालिरहेका किम जोङ उनका पिता किम सङ इल पनि कुख्यात तानाशाह थिए ।
८२ वर्षीय किम सङ इलको निधनपछि वर्तमान तानशाह किम जोङ उनले सत्ता सम्हालेका हुन् । उत्तर कोरियामा शासकहरुले त्यहाँका सबैभन्दा सुन्दर युवतीहरुलाई यौन दाशी बनाउने र मन नपरेकाहरुलाई विभत्सरुपमा हत्या गर्ने गरेका समाचार सार्वजनिक भैरहन्छन् ।
६- मुसोलिनी पुत्री एडा मुसोलिनि
इटालीका खुंखार तानशाह मुसोलिनीकी पुत्री एडाको कहानी प्रेम र प्रतिशोधको कहानी भन्दा हुन्छ । बाबुको तानाशाहीको विरोध गरे वापत एडालाई जेल मात्र हालिएन उनका पतिको हत्या समेत गरियो ।
आफ्नै पितासँग बदला लिनका लागि एडा स्विडेन भागिन् र कम्युनिष्टहरुसँग साँठगाँठ गरिन् । त्यो थाहा पाएपछि मुसोलिनीले आफ्नै छोरीको पनि हत्या गरिदिएका थिए ।
प्रकाशित मिति :२०७४ भदौ २६ गते सोमबार
देख्दा अति सुन्दर तर संसारकै खतरनाक टापु,जसलाई मृत्युको कुवा समेत भनिन्छ !
के रहस्यमयी हिममानव (यती) को अस्तित्व छ ? पर्वतारोहीले नेपालमा देखेको दाबी गरेका छन् !
चार वर्षीय बालकले आफ्नै सहपाठीलाई बलात्कार गरेको चिकित्सकबाट पुष्टि !
जंगलमा एक बालक बाँदरहरुको बथानमा हुर्के, बाँदरहरुकै स्वभाव र त्यस्तै कराउन सिके !
अमेरिकामा नेताले दिएको आदेश भन्दै एकै पल्ट ९१७ जनाले विष पिएर यसरी आत्महत्या गरे
पाँच रङ मिसिएर बग्ने संसारको सबैभन्दा सुन्दर र अद्भुत नदी (भिडियो सहित)